Booliiska Hindiya oo xiray tuugo ‘cirbixiyeeno’ iska dhigay - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka COURTESY: DELHI POLICE
Image caption Ninka iyo wiilkiisa tuugonimada lagu eedeeyay oo la sawiran booliiska
Booliiska dalka Hindiya ayaa xabsiga u taxaabay nin iyo wiil uu dhalay, kuwaas oo si turuufo ah u dhacay nin ganacsade ah kadib markii ay isaga dhigeen rag cirbixiyeeno ah, lana shaqeeya laanta dayax-gacmeedyada Maraykanka ee NASA.
Labadan qof ayaa ninka ganacsadaha oo Dehli ku sugan ku qanciyay in uu bixiyo lacag dhan $213,156 doolar si ay ugu gadaan qalabka qalinka, si ay uga sii iibiyaan NASA, halkaasna ay ka heli karaan macaash.
Waxase layaabka noqday ayaa ahayd in booliiska ay soo xireen iyaga oo gashan dharkii lagu yaqiinay cirbixiyeenada, taas oo ay aad ugu maadsadeed dadka isticmaala baraha bulshada.
Fadhato ka dhacday Florida
Booliiska ayaa wariyeyaasha u sheegay in ay ninka ku qiyaameen in qalinkan uu yahay mid dhif iyo naadir ah oo biliqda marka ay dhacdo la helo, kaas oo haddii NASA loo geeyo laga iibin karo lacag dhan $5.5 bilyan doolar.
Waxaa la sheegay in nimankan tuugada ah ay qalinka ku dul dhajiyeen walxo magnat ah si ay u qaldaan ninka ganacsadaha ah.